काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल कडा लकडाउन र नाका सिल गर्न प्रस्ताव ! – Khabaarpati
October 13, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल कडा लकडाउन र नाका सिल गर्न प्रस्ताव !
काठमाडौँ । दैनिक ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सांसदहरूले कडा लकडाउनदेखि नाका सिल गर्नेसम्मका सुझाव दिएका छन् । मुलुकभर थपिने संक्रमितको संख्यामा लगभग ५० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका हुने गरेकाले संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अवस्था झनै भयावह हुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले उपत्यकाबाहिर नियन्त्रण उन्मुख रहेको संक्रमण काठमाडौंका कारण बल्झिने जोखिम रहेको बताए ।
काठमाडौंको कोरोना संक्रमित बाहिरी जिल्ला गएर त्यहाँ संक्रमण फैलाए मुलुकले थेग्न नसक्ने उनले बताए । ‘बाहिरी जिल्लाहरूका अस्पतालमा औषधि र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छैनन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको स्थिति बाहिरी जिल्लामा आउने हो भने बाटोबाटोमा मान्छे मर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले २० देखि २५ दिन जति कडा लकडाउन लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । हालैमात्र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका उनले भीडभाड हुने ठाउँका सेवालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘भीड हुने ठाउँबाट कोरोना संक्रमण फैलिइरहेको छ । २०–२५ दिन कडा लकडाउन नगर्ने हो भने समस्या हुन्छ,’ उनले थपे, ‘दसैं–तिहारमा मान्छेको आउजाउ बढिरहेको छ । सरकार निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’